Mushure ma Kristo - Wikipedia
Mushure ma Kristo
Mushure me kuzvarwa kwa Yesu Kristo (pakapfupi: MK; Nge.: after christ's birth (kana AD) inzira yekureva makore akave nzira yekuverenga makore anoshandiswa zvakanyanya pasirose.
Gore roga roga rinoverengwa kubva parinofungidzirwa kuva gore rokuzvarwa kwa Yesu Kristo. Makore anotungamira kusvika pakuzvarwa kwaYesu anodaidzwa kuti Pamberi pe kuzvarwa kwa Yesu Kristo kana kungoti: BC
Nhoroondo ye arithmetic "Pamberi / Mushure ma Kristo"Edit
Kodhekisi iyi yakatangwa muna 527 AD ne mumongi Dionysius Exiguus muRoma.
Panguva iyoyo kuverenga kwezera kwakasiyana-siyana kwakanga kwakajairika. Gore rimwe chetero rinogona kudanwa kubva panguva yekutonga kwaMambo kana Kesari (semuenzaniso: gore rechishanu raKesari Agasto ) uye zvakare kubva pazuva rekusikwa kweguta reRoma (semuenzaniso: muna 1185 ab Urbe Condita. = kubva pakuvambwa kweguta).
Kumwe kuverenga kwaive kwakajairika panguva iyoyo kwaive fungidziro dzakasiyana "kubva pakusikwa kwenyika" zvichingodaro.
Dionysius mushure mekutsvaga akafunga kuti Jesu akazvarwa muna 754 kubva pakuvambwa kweRoma.
Kuverenga kwake haazivi gore "0"; zuva rekuzvarwa kwaJesu rinotorwa sekutanga kwegore. Saka zvinongoerekana zvapinda mu "1" gore negore risati rava gore 1 Kristu asati asvika = BC .
Ichi ndicho chikonzero nei inenge nyika yose yakakundikana kupemberera 2000 sekutanga kwemireniyumu itsva. Gore ra2000 rakanga riri gore rokupedzisira rezana ramakore kutanga muna 1901; Zana idzva remakore uye mireniyumu zvakatanga muna 2001.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Mushure_ma_Kristo&oldid=93978"
Last edited on 23 Kubvumbi 2022, at 16:44
This page was last edited on 23 Kubvumbi 2022, at 16:44.